ZEZIPHI KWEZI ZINJA ZISHUSHU EZIPHEZULU ONOKUZITYA? - ABABUYISI SIXHIBA
Umfazi Omangalisayo 2009
Umgaqo We-10 We-Cloverfield
Ngaba uhlala unqwenela ukuya kwindawo yokutyela kwaye u-odole abaphindezeli? Hlala nje phantsi ubuze uzame i-Ant-Man? Ewe, enkosi kule menyu yentsholongwane, kuvela ukuba kunokwenzeka uku-odola izinja ezishushu ezabelana ngamagama azo namagorha omeleleyo oMhlaba. Kwaye izithako ezikhethiweyo ngokuqinisekileyo nganye zinomdla.
Ngamanye amaxesha, udinga ukutya ukuze ulondoloze umhlaba, kwaye yile nto kanye le nja yokuvuselela i-Avengers inokunceda ukuba ndiyenze. Ndingathatha into enye yokuluma i-Iron Man kwaye ndikulungele ukuthatha nantoni na i-Titan ebisiya kum! Ngaba kungenxa yokuba izinja ezishushu zithiywa ngamagorha endiwaziyo kwaye endizithandayo, okanye ngaba ngenene ndifuna inja eshushu ene-mac kunye netshizi kuyo?
Wowu, ukubhala oko kwandenza ndaziva ndiziva ngathi ndinguHannibal Lecter endaweni yeAvengers…
Kodwa Inja ephezulu eHouston, eTexas inemenyu yokuphupha nganye ye-nerd. Ngaba bendisoloko ndicinga ngokuya kwindawo yokutyela kwaye ndi-odole iSigcawu-Ndoda? Ngokuqinisekileyo! (Kwakhona, ndiziva ngathi nguHannibal umbulali kufuneka abhale le nto, kodwa ayitshintshi into yokuba inja eshushu iyalawula.)
Lusuku luni lwe-unicorn
ndinenyembezi okwemizuzu eli-10. Ndiyathemba ukuba oku kuzisa lonke uvuyo endizisiweyo ngalo https://t.co/pqY7JNdLa6 pic.twitter.com/hiwa7HQ3uO
- ukusuka (@aprettierjesus) Nge-20 kaJuni 2021
Ndinemibuzo emininzi. Inye: Kutheni iAnt-Man iyinja ephefumlelweyo kaPhilly? UScott Lang uvela eSan Francisco KODWA uPaul Rudd wayelilungu le UPhilly Justice cast. (Ukuba awuyazi le joke, Nceda uye kufunda malunga Iipaki noLonwabo isiqhulo esihlala sindizisela lonke uvuyo kweli hlabathi.) Kananjalo, njengeTanos ifumana ifries kwinja eshushu? Mhlawumbi uThanos akalunganga ngokupheleleyo…
I-Hulk iluhlaza kunye nepelethi ye-bun (ngokunyanisekileyo eyona nto yam imbi kakhulu), kwaye ijoni lasebusika liyalithanda isidlo sakusasa ngesidlo sangokuhlwa, kodwa yonke into malunga nale menyu iyamangalisa? Kwaye ayisiyiyo neyona nxalenye intle. Linda nje ude ube Yabona zinjani ezi zinja zishushu.
Qaphela: imifanekiso yabo yelp! pic.twitter.com/NxC1KLHokf
Into yile: Ewe. Olu luhlobo lomxholo we-nerd endiwufunayo ebomini bam. Ndifuna nje ukutya kwe-nerdy engenanto yakwenza kwaphela nabaphindezeli ngaphandle kokuba namagama abo, kwaye ndifuna ukubazama bonke. Ngaphandle kweHulk. Ndiyaxolisa, Bruce, kodwa akukho nto iya kundenza ukuba ndizame i-pickle bun. Kodwa mhlawumbi ndingakulungela ukuhlala ndizame zonke ezi zinja zishushu ubuncinci kube kanye nje ukuba ndithe ndatya iAvengers. Kodwa ke kuya kufuneka ndizame ezi burger.
ayiboniswanga kwi-og tweet: i-burst monstrosity burger pic.twitter.com/NsNOJQ8A3m
Ke ngoku umbuzo ngulo: Nguwuphi uMphindezeli onokumtya?
uhambo lweenkwenkwezi lwakha ibhere
Daniel Jose Mdala
pearl kufuneka sithethe
I-dc comics zabasetyhini abaphambili
quileute incwadi yamabali ukusuka ngongcwalazi
ukumangalisa amahlaya vs ii-comics
splatoon wii u ngolwesihlanu omnyama